Scoliosis - एक रोग को मेरुदण्ड को झुकाव। हरेक वर्ष, रोग मान्छे को एक वृद्धि नम्बर मा निदान छ, र बिरामीको मात्र बच्चाहरु र किशोरका छैनन्। यो जीवन को गलत तरिका र कम्प्युटर प्रविधिको परिचय बाट stems। र यो सबै विद्यार्थी राम्ररी आफ्नो डेस्क मा बस्न भन्ने तथ्यलाई सुरु हुन्छ।
रोग को परिणाम फिर्ता मा दुखाइ, आन्तरिक अङ्गहरू, र समतल खुट्टा छन्। हालैको चरण surgically मात्र उपचार गर्न सकिन्छ। र यहाँ प्रारम्भिक चरणमा scoliosis छुटकारा कसरी प्राप्त, र यस लेखमा छलफल गरिनेछ छ। मुख्य कुरा हो - एक समय तरिका यो मुद्दा सम्बोधन गर्न सुरु गर्न।
कसरी घर मा scoliosis छुटकारा गर्न? मानिसजातिको बहुमत को यो चासो। तपाईं आफ्नो आफ्नै उपचार सुरु गर्न निर्णय गर्नुभएको छ भने पहिला आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। यो सही निदान निर्धारण गरेको छ।
सामान्यतया, उपचार धेरै चरणमा बाहिर छ:
- रोग प्रक्रिया रोक्न;
- यो मेरुदण्ड को टोन मा कमी;
- मांसपेशीमा को corset बलियो;
- यो विरूपण नै सुधार।
त्यहाँ केवल जटिल मा सबै भन्दा राम्रो परिणाम दिन हुनेछ जुन उपचार धेरै विधिहरू छन्। यी मालिश, व्यायाम, लोक चिकित्सा, एक विशेष corset र भौतिक चिकित्सा लगाउने। तर पनि यो एक धेरै, व्यायाम हिंड्न भने छैन, सही खान र आफ्नो मुद्रा अनुगमन, इच्छित प्रभाव छैन।
कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न scoliosis अभ्यास को?
त्यहाँ घर मा, तपाईंले आफ्नो मुद्रा समायोजन गर्न सक्ने गरिरहेको, केही प्रभावकारी अभ्यास हो। तर तपाईं यो सुरु गर्नु अघि, बाहिर केही nuances जाँच गर्नुहोस्।
रूपमा बिस्तारै सकेसम्म प्रत्येक व्यायाम प्रदर्शन। scoliosis अचानक आन्दोलनहरु लागि सिफारिस गरिएको छैन।
तपाईं ठूलो महसुस भने मात्र खेती। शरीर कमजोर छ भने, यो physiotherapist प्रक्रिया छैन भन्दा राम्रो छ।
जोसिलो छैन। के तपाईं धेरै गाह्रो वा पीडादायी छन् भन्ने महसुस भने, लोड कम।
निरंतर लोड बढाउनुहोस्। मात्र तरिका तपाईं इच्छित प्रभाव प्राप्त हुनेछ, र आफ्नो प्रयासमा छैन बर्बाद हुनेछ।
को अभ्यास बेला असर पालना गर्नुहोस्।
को कसरत बारे मा भूल छैन। यो एक सफल कसरत लागि जरूरी छ।
प्रत्येक व्यायाम prodelyvat गर्नुपर्छ कम्तिमा पाँच सात पल्ट।
ग आकारको scoliosis लागि अभ्यास को सेट
scoliosis को चाँडै छुटकारा प्राप्त चयन अभ्यास गर्न मद्दत गर्नेछ। यस्तो अभ्यास उद्देश्य - को पार्श्व मांसपेशीमा खींच। आखिर, तिनीहरूले मेरुदण्ड वरिपरि मजबूत फ्रेम गठन।
सीधा खडा, खुट्टा काँध-चौडाइ अलग राख्दै। काँध pas हात राख्नु र पछाडि र अघि आफ्नो हातमा rotational आन्दोलनहरु गर्छन्। दस बाह्र गर्न पटक तीन सेट गर्छन्।
एउटै स्थितिमा रहनुहोस्। तर अब कोहनी अगाडि रूपमा लामो तिनीहरू नछोऊ रूपमा आवंटित। यो दस मात्र तीन सेट हुनेछ।
फिर्ता माथि तल्ला पल्टिने। हात ट्रंक साथ विस्तार गर्नुहोस्। धेरै बिस्तारै टाउको उठाउन।
धेरै प्रभावकारी व्यायाम "डुङ्गा"। एउटै स्थितिमा झूट, हतियार र खुट्टा दुवै उचाल। यो स्थिति पकड र धेरै पटक दोहोर्याउन।
को एस आकारको scoliosis लागि अभ्यास को सेट
रोग दोस्रो डिग्री को झुकाव रूपमा अवस्थित छ। यो बलियो बनाउन आवश्यक छ हटाउन latissimus dorsi, र thoracic र कटि क्षेत्र।
आफ्नो पछाडि झूट र तीस डिग्री रहेको शरीर उठाने, katatelnye मुर्कुट्टा आन्दोलन गर्छन्।
छैन चौका खडा, तपाईंको एडी मा बस्न। जमीनमा दुवै हात छोड्दै। स्थिति सुरु फर्कन र यो व्यायाम सात पटक दोहोरिन।
एउटै स्थितिमा फिर्ता फ्लेक्स। यो व्यायाम "बिरालो" भनिन्छ। दस पटक गर्नुहोस्।
आफ्नो पछाडि भुइँमा झूठ र आफ्नो पक्ष मा आफ्नो हतियार सुत्छन्। एउटै समयमा मोजा आफूलाई पुल, र टाउको चिउँडो आकर्षित छ। दस सेकेन्ड को लागि यो स्थिति पकड। अघिल्लो स्थिति फिर्ता जानुहोस् र आराम। पाँच पटक दोहोरिन।
दायाँ-पक्षीय scoliosis को फारम - सबै भन्दा साधारण। यो जन्मजात वा प्राप्त या त हुन सक्छ। उच्च स्पाइनल झुकाव, को विकृति थप जटिल छ। तर निराश छैन। यो समस्या पनि व्यायाम र मालिश को माध्यम द्वारा हल छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा - एक व्यापक दृष्टिकोण। यो रोग मा तपाईं ध्यान भने, तुरुन्तै उपचार सुरु। सही-हात scoliosis उन्मुक्ति कसरी, तपाईं एक डाक्टर शीघ्र गर्न सक्नुहुन्छ। आत्म-दबाइ irreparable हानि ल्याउन सक्छ।
म scoliosis लागि एक चिकित्सा corset चाहिन्छ
विशेषज्ञहरु कडा scoliosis को सुधार को लागि यो मिसिन को प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। यसको प्रयोगले कमजोर मांसपेशी corset समर्थन छ। हामी मेरुदण्ड रोगको वरिपरि मांसपेशीमा विचार गर्दा सामान्यतया कमजोर र यसैले मेरुदण्ड को सही स्थिति कायम गर्न सक्दैन। को corset मुख्यतया रोग प्रगति छैन हुनेछ। थप एक नै झुकाव हटाउँदछ।
कसरी corset लगाउन
कसरी corset प्रयोग scoliosis छुटकारा गर्न? यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ त्यस्तो दृष्टिकोण कि - उपचार को एक महत्वपूर्ण भाग। उपकरण खरिद गर्नु अघि धेरै सिफारिसहरू पढ्नुहोस्।
- एक्लै एक corset किन्न नगर्नुहोस्। खरीद गर्नु अघि, तपाईंको चिकित्सक सल्लाह लिनुहोस्। उहाँले तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल सल्लाह हुनेछ।
- एक एकाइ प्रकाश कपास वस्त्र टुट्नु।
- यो प्रक्रिया मात्र अन्यसँग संयोजन प्रभावकारी हुन्छ।
- मा लगाएका को पहिलो केही दिन, तपाईं scrapes देख्न सक्छौं। चिन्ता नगर्नुहोस्, तिनीहरू हुनेछ।
- उपचार को प्रभावकारिता निर्धारण गर्न नियमित मेडिकल परीक्षा छ।
धेरै विरामीहरु को मालिश मार्फत scoliosis उन्मुक्ति कसरी प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ। यस मामला मा मुख्य कुरा हो - सही प्रविधी थाहा। सुरु गर्न प्रक्रिया खुट्टा र फिर्ता गर्न सहज संक्रमण संग खडा। मालिश उद्देश्य बलियो र मांसपेशीमा toning छ। साथै मांसपेशीमा मुछ्नु र घाँटी सार्न। पहिलो केही सत्र मांसपेशिहरु आराम र अर्को, विपरीत, यो बलियो बनाउँछ।
प्रभावकारी हुन मालिश, तपाईंले केही सुझावहरू प्रयोग गर्न आवश्यक:
- रोगी एक दायाँ-पक्षीय thoracic scoliosis छ भने, तब आफ्नो पेट मा झूठ गर्न, आफ्नो दाहिने हात आफ्नो फिर्ता पछि राख्न आवश्यक र उनको टाउको विपरीत दिशा मा गरियो।
- यो मालिश समयमा कस्मेटिक तेल र क्रीम प्रयोग गर्नु हुँदैन।
- जब दायाँ-कटि scoliosis सही गरेर बायाँ खुट्टा rewound र दाँया पट्टि टाउको बारी।
उपचार को परम्परागत विधिहरू
म scoliosis को परम्परागत विधिहरू छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन्? यो वैकल्पिक चिकित्सा मदत गर्न सक्छ सम्भव छ। तर! यी एजेन्ट मुख्य चिकित्सकीय जटिल संग संयुक्त हुनुपर्छ। यस्तो उपचार दुखाइ कम गर्न अनुमति दिने, compresses को आवेदन छ।
घ्यु को केही पात मह एक सय ग्राम संग मिश्रित छ। यो मिश्रण वोदका एक गिलास खन्याइन् र राम्ररी मिश्रण छ। अर्को, एक कपास कपडा बाहिर राखे। यस्तो संकुचन गर्ने दुखेको क्षेत्र लागू र एकै रातमा मा छोड्नु छ।
धेरै मानिसहरू scoliosis प्रयोग dandelions उन्मुक्ति कसरी आश्चर्य। केही त्यहाँ यस्तो उपचार मा जटिल। vzmite QUART जार र यो तेस्रो dandelions भर्न, वोदका एक गिलास थप: एक poultice तयार। यो जलसेक कहिले काँही मिलान, दस दिनको लागि खडा। प्रयोग गर्नु अघि संरचना, पानी, गरम संग पतला छ कपडे लागू र रात लागू गरियो।
वयस्क मा Scoliosis
धेरै मानिसहरू चिन्तित छन् "वयस्क scoliosis उन्मुक्ति कसरी।" पहिले, तपाईं एक राम्ररी निदान undergo र त्यसपछि उपचार गर्न अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यदि चाहेको र दृष्टिकोण जटिल समस्या बरु चाँडै हल गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा व्यायाम, एक corset लगाएका, मसाज लागि साइन अप र क्याल्सियम र भिटामिन डी ले
Scoliosis पहिलो र दोस्रो डिग्री सधैं सर्जरी बिना निको गर्न सकिन्छ। तसर्थ, फिर्ता बर्नर मा डाक्टर गर्न अभियान ढिलाइ र निदान गर्न जाने छैन।
चाँडै scoliosis उन्मुक्ति पाउनु, साथै एक चिल्लो र सुन्दर फिर्ता गर्न, तपाईं, दायाँ, व्यायाम खान आफ्नो मुद्रा हेर्न र ताजा हावा हिंड्न आवश्यक छ। यस मामला मा, रोग प्रगति छैन, र तपाईं सजिलै यो सामना गर्नेछ।
पेट दुख्यो: व्यवहार र कसरी रोक्न के?
लक्षण बिना तापमान 37
नाक Bruising: के र कसरी व्यवहार गर्न के?
तपाईं कार्ड कसरी पढ्न सिक्न चाहनुहुन्छ?
आफ्नै हात संग बेड लागि बाड